E Chiela Mbamalụ Igwe Ojoto
Dịka a sị na okpu eze na-adị mma n'isi onye o ruru, e guzobela ma chizuo Gerald Ọbụnadike Mbamalụ dịka eze ọdịnala ọhụụ nke obodo Ojoto, dị n'okpuru ndọrọ ndọrọ ọchịchị Idemili na steeti Anambra. Ya bụ echichi dara ụda bụ nke bịara dịka ọ gachara ọnwa ole na ole aka na-achị steeti ahụ, bụ gọvanọ Willie Obianọ jiri wee nyechaa ya asambodo dịka onye a ga-echi igwe n'obodo ahụ, dịka o siri bụrụ nchọpụta na mkpebi nke otu pụrụ iche e guzobere maka inyocha nsogbu ahụ dapụtara n'obodo ahụ banyere onye ga-abụ Igwe ọhụụ ha.
Ya bụ Igwe Mbamalụ bụzị onye a ma ugbu a dịka 'Eze Ojoto, nke atọ' nakwa dịka 'Eze Ọranyelụ n'Ojoto'.
N'okwu ya na mmemme ahụ oge e chibechara ya echichi ahụ, Igwe Mbamalụ gosipụtara nnọọ na obi dị ya ka ọka e ghunyere n'eju maka ya bụ oke ụbọchị na ihe ọ ga-eweta n'obodo ahụ. O toro ọhanaeze ndị bịara ịnọnyere ya, kọwaa na ọ bụ Chukwu na-eme eze, ma mekwa ka a mara na dịka udo batagoro na obodo ahụ ugbu a, na mmepe na ọganihu ga-esochikwa ya azụ n'ogogo dị elu maka na udo na-eweta mmepe.
N'okwu nke ya, Igwe Roland Odegbo, bụ igwe Nteje nakwa otu n'ime ndị bịara ịnọnyere ya, kelere Chineke onye mere oke ụbọchị ahụ, ma kpekwazie ka o nye Igwe Mbamalụ amara, ike na mmụọ iji wee chịa dịka o siri bụrụ mmasị ya.
Mmemme ahụ dọtara ọtụtụ ndị echichi dị iche iche nakwa ọtụtụ ndị e ji okwu ha agba izu, nke gụnyere aka chịbụrụ steeti Anambra n'oge gara aga, bụ oriakụ Virgy Etiaba; onye na-anọchite anya ọgbọ nta nkwado Idemili Nọọtụ na Sawụtụ n'ụlọ ọgbakọ nnọchi anya etiti, bụ maazị Obinna Chidịọka; ndị ndu ụka, ndị isi ụlọ mmepụta ngwa ahịa, tinyere imirikiti ndṅ ọzọ siri ebe dị iche iche wee bị ihụrụ ka ya bụ mmiri siri wee zoo.
Ihe pụtakarịchara ihè na ya bụ mmemme bụ ikpube Igwe Glerald Mbamalụ okpu kpọnkwem dịka Igwe Ojoto, egwu uhie a gbara, inye igwe ihe onyìnye dị iche iche, tinyere mmemme ịkụ ịgazị n'eze, bụzị nke mere ka ụbọchị magbuo onwe ya.